Igwe ihu igwe Pyrenees: njirimara, udu mmiri na udu mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ihu igwe nke Pyrenees. Ọ bụ mpaghara ugwu ebe ihu igwe bụ ugwu. Nke ahụ bụ, o nwere njirimara ndị bụ isi dịka okpomoku dị n'ozuzu ya na oke mmiri ozuzo. Ọ bụ ezie na ugwu ihu igwe nwere àgwà ndị a na ọ fọrọ nke nta ọ bụla ebe, anyị na-aga iji nweta ntakịrị ihe na Pyrenees ihu igwe ebe ọ bụ na e nwere ụfọdụ peculiarities na njirimara nke ha.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara na njirimara niile nke ihu igwe Pyrenees.
2 Climate Climate, ihu igwe di iche
3 Pyrenees ihu igwe: winters udu mmiri na ọkọchị ọkọchị
Otu n'ime ihe ndị a na-enyerịrị n'uche mgbe ị na-akọwa ụdị ihu igwe a gbasara ọnọdụ ugwu ọzọ bụ ebe ọ dị. Ebe ọ bụ na Pyrenees bụ ihe eke ókè na ihu igwe ókè n'etiti osimiri atlantic na Oke Osimiri Mediterenian, nwere njirimara pụrụ iche. Anyi aghaghi iburu n’uche na ihu igwe nke Atlantic bu ihe puru iche, ya mere, odida obodo Mediterenian dika odi iche. Igwe ihu igwe Pyrenees dị iche iche dị ka ọnọdụ si dị. N'ebe ugwu ọdịda anyanwụ ọ bụ ihu igwe dị ka nke Atlantic, ebe ọ bụ na ndịda ọwụwa anyanwụ ọ bụ ihu igwe Mediterranean.
N'ụzọ bara uru, anyị na-atụgharị nke a na mgbanwe nke ihu igwe ebe oke mmiri ozuzo na-ebelata mgbe anyị gafere na ndịda ọwụwa anyanwụ. Nke ahụ bụ, Pyrenees nke Catalan na ndagwurugwu tupu oge Pyrenean bụ mpaghara kachasị kpọrọ nkụ na ihu igwe Pyrenees dum. Agbanyeghị, anyị ga-eburu n'uche na enwere ụfọdụ mpaghara dịka Canigó na Olot nke nwere ike ịnweta oke mmiri ozuzo nke ikuku dị mkpa kpatara.
N’aka ozo, enwere mpaghara Pyrenean ndi ozo kachasi nso na Basque Country. N'ebe a, anyị nwere mpaghara ọdịda anyanwụ dum nke Aragon na Navarra, nke dịkarịsịrị nso na Atlantic Ocean na Gulf of Gascony. Nke a na emeputa oke mmiri ozuzo oge niile na ebe dị jụụ ebe enwere mmiri. Ọnọdụ okpomọkụ a na-adịtụ ntakịrị ma iru mmiri ka dị elu n'afọ niile, ọbụlagodi n'oge ọkọchị. N'ihi ịdị elu nke ugwu, ihe omuma ndia di na ugwu ugwu. N'aka nke ọzọ, naanị ihe fọdụrụ na ọgba aghara ndị sikwa n'Oké Osimiri Atlantic abịa na-abịa na mkpọda ndịda. Anyị nwere ọgba aghara na-adịkwaghị ike n'ihi njem ha na peninsula ahụ.
Mgbe nsogbu ndị a ruru Pyrenees, a na-emegharịghachi ọtụtụ n’ime ha ọzọ na-ewekwa oke mmiri ozuzo ọzọ. Iji maa atụ, ọ bụrụ na anyị agụọ Pyrenees nke Aragon, anyị ga-ahụ na mmiri ozuzo na-ebelata ka anyị na-aga n’ebe ndịda. Otu a ka anyị si enweta mmiri ozuzo ka ukwuu na ndagwurugwu Ansó.
Climate Climate, ihu igwe di iche
Na ndagwurugwu Cerdanya anyị nwere ihu igwe dị mma. Na ọ bụ ndagwurugwu nwere ọtụtụ awa na-acha na Europe niile. Anyị na-ekwu maka ihe karịrị 300 awa nke anwụ na-acha kwa afọ, ebe anyi mara na otutu ezigbo ihu igwe n’agha. Ọ bụ ezie na ọ bụ mpaghara ugwu, ọ na-enwe oge dị ụtọ nke ukwuu. Ọ bụ otu ihu igwe nke na-enye ohere ka osisi dị iche iche nwee ike ịzụlite na mpaghara ndị a, mgbe n'akụkụ ndị ọzọ n'otu elu ha enweghị atụ. Nke ahụ bụ, ọ nwere ike ịzụlite ahịhịa ọbụlagodi na anyị nọ n'ebe dị elu ebe ọ na-enweghị ike ịnọ n'akụkụ ugwu ọ bụla ọzọ.
N’agbanyeghi na awa anwu anwu kariri, anyi na-enwe oge okpomoku ebe enwere onodu ubochi. Ọ dị mfe na n'oge ọkọchị ọ nwere ike ịnwe ifufe na egbe egbe na àmụmà. Eziokwu mara oke mma banyere ndagwurugwu Cerdanya bụ na n'oge oyi enwere oge nke akụkụ ala nke ndagwurugwu ahụ dị jụụ karịa ugwu. Ọ bụ ihe mgbanwe site na ọnọdụ oyi na-agbada ala ala n'ihi ịdị elu na njikọta n'etiti ikuku mmiri.
Pyrenees ihu igwe: winters udu mmiri na ọkọchị ọkọchị
Uzo abuo abuo puru iche na Pyrenees ihu igwe: udu mmiri na udu mmiri. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ntinye nke ikuku mmiri site na ugwu site na ndịda bụ nke sara mbara, a na-ahụkarị ihe a n'oge oge oyi karịa n'oge ọkọchị. Anyị maara na n'oge ọkọchị, ụzọ ikuku na-atụgharị site na ndịda ruo n'ebe ugwu, ọ bụ ya mere anticyclones nke na-esi na Mediterenian pụta. Antyclones ndị a na-eme ka okpomọkụ dịkwuo elu ma na-eme ka ihu igwe na-acha. Ezigbo ihu igwe na-ebukwa ụzọ na ugwu Pyrenees na-achịkọta ọtụtụ awa nke anyanwụ na-enweghị igwe ojii.
Eziokwu ahụ na oge ọkọchị enweghị ọtụtụ igwe ojii na-eme ka ọnụọgụ nke radieshon dị elu. Nke a na ọnọdụ mmepe nke ụdị dị iche iche nke osisi na ahịhịa na ha chọrọ ọtụtụ awa nke anwụ kwa ụbọchị.
Dị ka mmiri ozuzo, ọnọdụ okpomọkụ na-akawanye mma ka anyị na-aga n’ebe ndịda. N'echiche a, anyị nwere ike ikwu na maka ndị bi na ndịda ugwu Pyrenees bụ ọta zuru oke iji chebe onwe ha pụọ ​​n'ọnọdụ ọjọọ na ajọ ihu igwe. Ọnọdụ ọjọọ ndị a sitere na ugwu ma ọ bụ kpọmkwem site n'Oké Osimiri Atlantic ma ọ bụ site na mgbago ugwu Europe.
Enwekwara ụfọdụ esemokwu na Pyrenees ihu igwe mgbe anyị na-agagharị na mkpọda ọ bụla dị ka nhazi ya si dị. Ugwu ndị ahụ chere ihu n'ebe ugwu ha na-enwe okpomoku di ala na oke mmiri ozuzo, ma mmiri ozuzo ma snow. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị enyochaa mkpọda ndịda, anyị ga-ahụ na okpomoku dị ọkụ karị na oke mmiri ozuzo na-ebelata. Nke a pụtara na ugwu ndị niile na-eche ihu n’ebe ndịda na-abụkarị ebe osisi Pyrenean na ahịhịa bi na ya.
Ọnọdụ nke okpomọkụ, iru mmiri, ọchịchị ikuku, irradiation nke anyanwụ, na-ewepụta njirimara pụrụ iche maka ụdị ihu igwe dị n'etiti Oké Osimiri Mediterenian na Oké Osimiri Atlantic. Ya mere, ọ bụ mpaghara pụrụ iche ọ bụghị naanị n'ihi ihu igwe, kamakwa n'ihi ịdị adị nke flora na fauna.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihu igwe Pyrenees na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Pyrenees Ihu Igwe